Al-qacida oo dardaaran cusub usoo dirtay Alshabab | Shabakada Alshahid
Sheikh Ayman Al-Tawahiri
Dubai (Alshahid)- Ururka Al-Qacida ayaa mar kale fariin dardaaran ah usoo diray Xarakada Alshabab ee ka dagaalanta Somalia isla markaana ah Koox lagu tiriyo inay xiriir la leedahay Al-Qacida.
Fariintan oo ahayd Cod lagu baahiyay Shabakado Islaami ah oo Internetka ka dhisan ayaa waxaa soo diray hogaamiyaha ugu sareeya Al-Qacida Sheikh Ayman Al-Tawahiri.
Sheikh Al-Tawahiri ayaa ku booriyay Alshabab sii wadista dagaalka ka dhanka ah waxa uu ugu yeeray Kirishtanka soo duulay ka dib markii Ciidamada Kenya ay xaruntii ugu dambeeyay oo Alshababku leeyihiin dhawaan la wareegeen.
Hogaamiyahan ayaa si gaar ah u xusay in Ciidamada Kenya ee bishii September xoogagga Alshabab kasoo ceyriyay magaalada Kismaayo oo ahayd halkii ugu dambeeysay ee ay Xoogaggaasi ku sugnaayeen. Waxaana uu ku booriyay Alshabab inaanay baqdin ka qaadin tirada badan ee ay ka koobanyihiin Ciidamada Afrikaanka ah oo uu yiri waa kuwo taageero ka helaya Dalka Mareykanka.
Sheikh Ayman Al-Tawahiri ayaa fariintisan oo maalintii Talaadada ee Shalay la baahiyay waxaa uu ku yiri “ Fariinteydan waa tii ugu horeysay ee aan u dirayo Walaalaha Mujaahidiinta ah ee Somalia iyo hogaankooda Alshabab. Waxaan leeyahay waxba ha eegina tirada Kirishtanka. Taasi waa fursad idiin timid oo uu Ilahay idin waafajin doono. Ku xasuuqa Dabka Jihaadka iyo kuleelkiisa. Ku daba-gala dagaalada gaadmada ah iyo kuwa naf-hurnimada ah. Ceyriya ilahay ha idin garab galee”
Wuxuu intaa ku daray in Ciidamada midowga Africa uu aayahoodu noqon doono guul daro la mid ah tii ku dhacday Ciidamada Ameerikaanka ah ee lagu qasbay inay isaga baxaan Afganistaan iyo Ciraq, isla markaana ay guul daro ku dhacday Ciidamadoodii joogay Libiya iyo Yemen.
“Ku bishaareysta in dadkani ay noqonayaan kuwo duleysan ilahay awoodiisa.. Waxaa lagu fashilay Ciraq, waxay ka baxeen Afganistan. Waxaa Bangazi lagu dilay Safiirkoodii. Calankoodii surnaa Safaaradahooda Qahira iyo SANCA-na waa la dajiyay, waxaana booskiisa la suray Calanka Jihaadka” ayuu sii yiri.
Hadalkan dambe wuxuu ku tilmaamayay Dibad-baxyaal iyagoo ka caraysan Filim Islaamka lagu xumeynayay oo Mareykanka lagu sameeyay weeraray Safaarado Mareykanku uu leeyahay.
Wali lama ogaan xaqiiqada Fariintan Codka ah iyo inay tahay mid si dhab ah uga timid Al-Tawahiri.
Sheikh Ayman ayaa sidoo kale Dadka Soomaalida ah ku booriyay inay taageeraan Dagaalyahanka Alshabab ee horjeeda Ciidamada Kenya ka socda ee magaalada Kismaayo galay Bishii September ee lasoo dhaafay.